लामो समय देखि हामी नेपाल एफएममा संलग्न छौँ । एक समय जनताको पक्षधर अभियानलाई रेडियो माध्यमसँग जोडिन्थ्यो । रेडियो तरङ्ग आम नागरिकको सहज र सरल पहुँचमा भएकै कारण यसैलाई माध्यम बनाउनु आवश्यक पनि थियो । आठ दशवर्ष अघिको स्थिति अब रहेन । सवा तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा अहिले झण्डै दुई करोड स्मार्ट फोन प्रयोगमा आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । तिनै स्मार्ट फोन र लाखौँ ल्याप्टप मार्फत आफ्नो रुचि अनुकूलका समाचार पोर्टलहरू, भिडियो न्युज र टेलिभिजन समाचारहरू पढ्ने सुन्ने र हेर्ने नवीन संस्कार स्थापित भइसकेको छ ।
झनपछि झन् लोकप्रियताको चुली चढिरहेको छ । प्रविधिले हामीलाई प्रदान गरेको यो सुविधा सबै उमेर, तह र तप्काका मानिसहरू उपयोग गरिरहेका छन् । नेट प्रविधिले प्रदान गरेको यो अपार सुविधालाई सदुपयोग गर्दै हामी पनि फरक रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छौँ । स्वास्थ्य सरोकारमा केन्द्रित भएर अनलाईन पोर्टलका रूपमा हामी जिम्मेवार ढङ्गले आम नागरिकसँग जोडिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । यो पत्रकारिताकै अर्को रूप हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । नागरिक स्वस्थ नभएसम्म राष्ट्र स्वस्थ हुनै सक्दैन भन्ने अवधारणा अनुरुप हामी स्वस्थ राष्ट्र निर्माणमा थोरै भए पनि हात बढाउने अभियानमा संलग्न भएका छौँ । स्वास्थ्यको सवालमा अझै पनि नेपाली जनमानसमा भ्रम र अन्धविश्वासका जरा उखेलिएका छैनन् ।
सरकारले अहिले सुदूर पश्चिममा छाउगोठ भत्काउन प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेको छ । तर हामीलाई लाग्छ– मानिसको दिमागबाट भ्रम, कुपरम्परा र अन्धविश्वासको जरा नउखेलेसम्म छाउगोठ भत्काएर मात्र कुनै अपेक्षित परिणाम आउन सक्दैन । बरु हजारौँ आमा दिदी र बहिनीहरू छाउ बार्न अब नाङ्गो आकाशमुनि ओत लाग्न पुग्नेछन् र छाउगोठमा भन्दा बढी असुरक्षित हुनेछन् । भ्रम, कुपरम्परा र अन्धविश्वास छिमल्न शिक्षा र चेतना निर्माण गर्नु पहिलो पूर्वशर्त हो । पुस्तौँ पुस्तादेखि अज्ञानता र अशिक्षाको जालोभित्र गुम्सिएका विकट एवम् दूरदराजका ग्रामीण नागरिकले निर्वाह गरिरहेको विरामी हुँदा धामी झाँक्री लगाउने परम्परालाई तोडेर विज्ञानसम्मत उपचार प्रविधिमा ल्याउन ती ठाउँमा राज्यले वैज्ञानिक शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउनु पर्दछ ।
सुविधा सम्पन्न शहर केन्द्रित हाम्रा स्वास्थ्य योजनाहरूमा अरबौँ बजेट खन्याइसक्यौँ तर ती दूरदराजका ग्रामीण बस्तीमा सिटामोल र जीवनजल अझै पुगेको छैन । यो तीतो यथार्थ कहिले बदलिने अनि कसले बदल्ने ? व्यवस्था बदलिएको पनि वर्षौं भइसक्यो तर अवस्था उस्तै छ किन ? करोडौँ बजेट निखारेर ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रमा निशुल्क बाँड्न पठाइएको औषधि गोदाममै डेट एक्सपायर भएपछि खाडलमा पुर्ने गरेका समाचार पढ्न हामी अभिशप्त छौँ किन ? यी र यस्ता प्रश्नहरू असङ्ख्य छन् । यी प्रश्नहरूबाट राज्य बेखबर बन्न पाउँदै पाउँदैन । यसैसँग सम्बन्धित भएर स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना, सम्बन्धित निकायहरूप्रति खबरदारी गर्ने प्रमुख उद्देश्य राख्दै हेल्थपाटी मार्फत हामी स्वास्थ्य पत्रकारितामा जुर्मुराएका छौँ । हामी कति सफल हुन्छौँ त्यो त भविष्यले बताउने नै छ । यद्यपि स्वास्थ्य सरोकारसँग सम्बन्धित सवै निकायहरू, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरू र आम नागरिकबाट यथेष्ट सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।